Inkqubo yeshawari ye-LED esebenza izinto ezininzi kunye nobushushu obuthe rhoqo-IiFaucethi zaseKitshini eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iinkqubo zokuhlamba / Inkqubo yeShower yeShower yeShower yokuSebenza ngokuBanda rhoqo
Inkqubo yokuhlamba i-LED yokuSebenzisa ngokuSebenzayo ngoBushushu obuQhelekileyo
Emva komsebenzi, vula iseti yeshawari kwaye ukonwabele ukukhululeka kwesihlambi kunye nosapho lwakho. Lawula umbala wezibane ze-LED ngolawulo olukude, yenza imeko elungileyo kunye nokuphelisa ukudinwa kwakho. Olu lolona khetho lubalaseleyo lokonwabela ubomi bakho
Le yishawa ekhanyayo ye-LED esetiweyo ene-digital touch screen remote control.
Ukuphuma kwamanzi: imvula, umlomo we-4-intshi yomzimba, ishawa ngesandla. Ukutshintshwa kwe-thermal kwenziwa ngazo zonke izinto zobhedu.
Iqondo lobushushu lingagcinwa kuma-38 degrees ukunqanda ubushushu nokubanda ukunqanda ukutsha. Abantu abadala, abantwana kunye nabasetyhini abakhulelweyo banokuyisebenzisa.
Ulawulo olukude lunokulawula umbala wokukhanya. Cinezela nje iqhosha kwaye utshintshe umbala owufunayo.
Le ntloko yeshawa inokuba namava emvula ngokwenene, kunye ne-3-intshi ye-3-isiqwenga somzimba sokuhlamba umzimba wakho ukuze ukhulule ukudinwa kunye noxinzelelo. Olu lukhetho lwakho olufanelekileyo kunye nokhetho lokonwabela ubomi.
Inkqubo yokuhlamba kunye nezibane ze-LED
Emva komsebenzi, vula iseti yeshawari kwaye ukonwabele ukukhululeka kwesihlambi kunye nosapho lwakho. Lawula umbala wezibane ze-LED ngolawulo olukude, yenza imeko elungileyo kunye nokuphelisa ukudinwa kwakho. Olu lolona khetho lubalaseleyo lokonwabela ubomi bakho.
Intloko enkulu yokuhlamba i-360 * 500MM, le shawa inendawo yokuhambisa amanzi eyi-165. Intloko yeshawari ye-SUS304, umgangatho ophezulu wokukhupha amanzi abicah, wosula ngobunono, ungasusa i-limescale, impilo kunye nokukhuselwa kwendalo, kulula kwaye kuyasebenza.
Ukudityaniswa kwamayeza amaninzi asecaleni kunye noyilo olusebenziseka lula kwenza igumbi lokuhlambela lihlale kamnandi.
Thermostatic yolawulo vana
Iswitshi ye-thermostat ayinaxhala malunga nokutsha kwabantwana kunye nabantu abadala. Ungayonwabela leeshawa kunye nesithandwa sakho, ukuphelisa ukudinwa kosuku.
Ubungakanani bemveliso: 200 * 35 * 15mm
Ishawa yesikwere esenziwe ngobhedu olupheleleyo inoyilo oluncinci kunye nesiphatho esihle seshawa efanelekileyo.
Umngxuma wokutshiza wokuzicoca ohlukileyo, ukhuseleko kunye nokusingqongileyo.